गुल्मीमा हेर्दाहेर्दै पहिरोले बगायो ३ घर, बनायो बिचल्ली हेर्नुहोस भिडियो | Samacharpati
प्रकाशित मिति: 2076 श्रावण 10 शुक्रबार(July 26, 2019) 4:24 PM बजे Posted By:Sunita Karki
गुल्मी, १० साउन । गत मंगलवार राति अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परी सत्यवति गाउँपालिका वडानम्बर ३ र ४ को लिम्घा र ठूलो लुम्पेकमा डेढ वर्षीय बालक सञ्जु बिकसहित तारा बिक, माया बिक, बबी बिक, निर्मला बिक, पम्फा बिक, अञ्जली बिक, हिमान्सु बिक, छली बिक, सिवानी बिक, तिलकुमारी तरामु, दर्शन तरामु र दुर्गाबहादुर सिंजालीको मृत्यु भएको थियो ।
उनीहरुको काठमाडौंको त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताएका छन् । मृतका परिवारलाई तत्कालको लागि कि्रयाखर्चका लागि गाउँपालिकाले १०/१९ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । थप राहतको लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको प्रमुख जिज्ला अधिकारी पौडेलले बताएका छन् । पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक अबरुद्ध भएपछि हेलिकोप्टरमार्फत २० क्वीन्टल चामल, दुई क्वीन्टल दाल र एक क्वीन्टल चिउरा ठूलो लुम्पेकमा पुर्‍याइएको छ ।
पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भएकोले दुई स्थानका करिव ६ सय घरपरिवार सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ३ सय पशु चौपायाँ मरेको अनुमान गरिएको छ । बिस्थापित परिवारको नामावली संकलन सुरु गरिदैंछ । हेर्नुहोस् भिडियो
Tags: gulmi news, काठमाडौंको त्रिबि शिक्षण अस्पताल, बाढी पहिरो समाचार
सोह्र श्राद्ध नगरे के हुन्छ ? एउटा
दुवै मृगौला फेल भएपछि ! टिनको टहरोमा